01/26/14 ~ Myanmar Forward
အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းနေရင် ငပေါလိုပဲနေတယ်ဆိုတဲ့ အဆိုတော်မလေး
Posted by drmyochit Sunday, January 26, 2014, under အနုပညာ | No comments
လူသန်းပေါင်းခြောက်ဆယ်ထဲ မှာအောင်မြင်ကျော်ကြား တဲ့ သူ တစ် ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာက တကယ်ကို မလွယ်လှတဲ့ ကိစ္စရပ်ပါ။ အောင်မြင် ကျော်ကြားသူတွေမှာ ဘယ်လိုကိုယ် ရည်ကိုယ်သွေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားလဲ၊ သူတို့ကဘယ်လို အကြောင်းအရာ တွေပေါ်မှာအသေးစိတ် အာရုံစိုက် ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစ ရာပါပဲ။
အခုလိုမျိုး အိမ့်ချစ်ဆိုပြီး အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာတာ ဘာ ကြောင့်လို့ထင်လဲ
နံပါတ်(၁)က အိမ့်ချစ်ဝါသနာ အရင်းခံတယ်။ နံပါတ်(၂)က ၀ါသ နာအပေါ်မှာကြိုးစားတယ်။ နံပါတ် (၃)က အိမ့်ချစ်ရဲ့ ကံ၊ စန်း အတွက် ဘာသာတရားလိုက်စားတယ်။ နံ ပါတ်(၄) အိမ့်ချစ် ရဲ့အမေက အများ ကြီးထောက်ပံ့တယ်။ တွန်းအား တွေပေး တယ်။ အဲဒါတွေနဲ့အောင် မြင်လာတယ် လို့အိမ့်ချစ် ထင်ပါ တယ်။
ပရိသတ်ကရော အိမ့်ချစ်ကို ဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့ထင်လဲ
အဲဒါကတော့ ကုသိုလ်ကံပေါ့။ ပရိသတ်ချစ်တဲ့ကံလေးပါလာတယ် လို့ထင်ပါတယ်။
MTV တွေရိုက်တဲ့အခါ၊ ရှိုး တွေဆိုတဲ့အခါ မိတ်ကပ်လိမ်းတာကိုအိမ့်ချစ်ကြိုက်နှစ်သက်လား
မကြိုက်လည်းလိမ်းရတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အိမ့်ချစ်က မိတ်ကပ်လိမ်း ရတာကိုမကြိုက်ဘူး။ အပြင်ထွက် ရင်တောင် မျက်နှာပြောင်နဲ့ပဲထွက် တာ။ စင်ပေါ်တက်မှသာ မိတ်ကပ် လိမ်းတာ။
ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းဆိုရင် ငပေါလိုပဲနေတယ်။ ပြောချင်တာပြော တယ်။ ဆိုချင်တာဆိုတယ်။ အိမ့်ချစ် ကယောက်ျားလေးလည်းနည်းနည်း ဆန်တယ်။
အိမ့်ချစ်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကိုယ် တိုင်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး လှတယ်လို့ ထင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းက ဘာဖြစ်မလဲ
ဘာမှမရှိဘူး။ မပြောတတ် ဘူး။ သူများတွေပြောတာကတော့ အိမ့်ချစ်က မျက်နှာတန်ဆာပလာ ကောင်းတယ်တဲ့။ မျက်ခုံးကောင်း တယ်လို့ပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ့်ချစ်က အကုန်လုံးကိုစိတ်ညစ် တယ်။ မျက်ခုံးကောင်းတာလည်း မ ကြိုက်ဘူး။ နှာခေါင်းချွန်တာလည်း မကြိုက်ဘူး။ မျက်လုံးပြူးတာလည်း မကြိုက်ဘူး။ ခြေထောက်တွေ၊ လက်တွေလည်းမလှဘူး။ လက်တွေ ဆိုလည်းမလှဘူး။ ယောက်ျားလက် တွေလိုပဲ တုံးတုံးလေးတွေ။ ခြေ ထောက်တွေဆိုလည်း တိုတိုလေး တွေ။ ဘယ်နေရာလှလဲဆိုတာ မ ပြောတတ်ဘူး။
တေးရေးဆရာက သီချင်း တစ်ပုဒ်ပေးလိုက်ရင် သီချင်းအ လိုက်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ရတတ်တဲ့သူ လား
အလေ့အကျင့်တော့ဖြစ်နေပါ ပြီ။ ကြော်ငြာဆို သီချင်းချက်ချင်း ချပေး ချက်ချင်းဆိုရတာ။ ကြော် ငြာဆိုရင် တစ်နာရီလောက်ပဲအချိန် ရတာ။
Posted by drmyochit Sunday, January 26, 2014, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဘန်ကောက် ၃ ပုံ ၂ မှာ ကြိုတင် မဲပေးမှု ရပ်ဆိုင်း
Posted by drmyochit Sunday, January 26, 2014, under Software | No comments
ဒါကတော့ Zip ဖိုင်တွေကိုပြုလုပ်ပေးပါတယ် ကျွန်တော်မပြောလဲသိပြီးလောက်မယ်ထင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်ခင်ဗျားသင့်ရဲ့စက်မှာဒါလေးမရှိရင်တော့ မရဘူးနော် ဒါလေး ကတော့တော်တော်လေး ကိုအသုံးဝင်ပါတယ် မိတ်ဆွေများ အတွက်လဲ အကျိုးများ စွာသက်ရောက် ပါတယ် လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့အောက်မှာဒေါင်းသွားလိုက်နော်..
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 5.67Mb ရှိပြီး Full Versionဖြစ်ဖို့ အထဲမှာ Keygen ဖိုင်ပါပါတယ်ခင်ဗျာ...
ဒေါင်းရန်===>> File==> Downlaod
ချစ်စဖွယ်အပြုံးလေးနဲ့ ပရိသတ်ကို ဖမ်းစားထားခဲ့သူလေး မိုးယုစံကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄မှာ ကျရောက်မယ့် ချစ်သူများနေ့ကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခုလို ဖွင့်ဟပါတယ်။ ‘နှစ်တိုင်းတော့ ကားရိုက်ပါပဲ။ ပရိသတ်တွေကတော့ လက်ဆောင်တွေပို့ပေးကြတယ။် ဒီနှစ်က သူများ ကိုလဲပေးဖို့မရှိဘူး။ ဒီနှစ်ရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုကလဲ ရှုတင်နဲ့ပဲဆိုတော့ ထူးခြားမှုတော့မရှိပါဘူး’လို့ သူမက ပြောပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် အချစ်ရေးနဲ့ မင်္ဂလာသတင်းကိုလည်း သူမက ‘မိုးယုရဲ့ မင်္ဂလာသတင်းက အဝေးကြီး လိုပါသေး တယ။် ကိုယ့်အစ်မတွေရဲ့ မင်္ဂလာသတင်းကြားရတော့ ၀မ်းသာမိတယ်။ ချစ်တဲ့သူ အချင်းချင်း ယူကြတယ် ဆိုတော့ ကိုယ်လဲအားကျပါတယ။် အချစ်ဆိုတာက အမြဲတမ်းကြီး အကောင်း ပဲတော့ မသွားဘူး။ အချစ်ရေး ကံကောင်းမကောင်းဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ဖူးစာဖက်အပေါ်မှာလဲ မူတည်သေး တယ်။ ကိုယ်နဲ့ဖူးစာကံပါမဲ့သူက ဘယ်သူမှန်းမသိသေးတော့ ခုချိန်က အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှမရှိသေးဘူး။ ရွေးချယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ အပြင်ကပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီထဲကဖြစ်ဖြစ် လူပဲလေ။ ကိုယ့်ဖူးစာကံပါမဲ့သူပေါ့။ ဒါပေမဲ့ညီမက အနုပညာ အလုပ်လုပ်တဲ့သူမို့လို့လား မသိဘူး။ ညီမရဲ့ဖူးစာဖက်ကို အနုပညာလောကထဲကလူ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ အိမ်ကတော့ ဘာမှမပြောထားပါဘူး။ အခုထက်စာရင် အရင်တုန်းက အများကြီးချုပ်ချယ်တယ်။ ကိုယ်လဲစဉ်းစားတတ်တဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့ ညီမကိုစဉ်းစားခိုင်းပါတယ်’တဲ့။
Posted by drmyochit Sunday, January 26, 2014, under အမေးအဖြေ | No comments
Q. ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အန်တီမေ မှာ ဘယ်လိုမျိုး ဝေဒနာတွေ ခံစားနေရ ပါသလဲ။
A. အန်တီမေက ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာ ရင်သား ကင်ဆာ ရောဂါ စဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကနေ ၁၉၉၅ လောက်မှာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေက သားအိမ် ကို ကူးပြန်တာကြောင့် သားအိမ် ကို ဖြတ်ထုတ် ခဲ့ရ တယ်။ နောက်ပြီး ကင်ဆာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဝေဒနာတွေနဲ့ အရိုးပွ၊အရိုးပါးတာတွေ ခံစား နေရပါတယ်။
A. တချို့ကတော့ ကင်ဆာဆိုတာနဲ့ လန့်ပြီး တစ်ဝက်လောက် သေသွားပြီ။ အန်တီမေ ကတော့ မကြောက် ပါဘူး။ ကြောက်နေလို့ ပျောက် မှာတဲ့လား။ ရဲရဲရင်ဆိုင် ရုံပေါ့။ဆေးကု စရာ ရှိတာ ကုတယ်။ စိတ်ကို ဖြေတယ်။ အဓိက ကတော့ တရားနဲ့ ဖြေတာပါပဲ။ အန်တီမေ က ရိပ် သာမှာ တရားသွားထိုင်ဖို့ အဆင်မပြေဘူး။ ရောဂါတွေ ရှိနေတော့ ထိုင်ရထ ရတာ၊ အိမ်သာ သွားရတာ အစစ အရာရာ အန်တီမေ့ အတွက် မလွယ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဆရာတော် ဦးဇောတိကရဲ့ တရားစာအုပ်တွေ ဖတ်တယ်။ TV က လာတဲ့
A. အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်တယ်လေ။ တံမြက်စည်း လှည်းတာ၊ ကြမ်းတိုက်တာ တွေပေါ့။ အခု နောက်ပိုင်းတော့ လက်တွေက ရောင်ပြီး အ ရိုးအဆစ်တွေ နာတော့ သိပ်မလုပ်
မြေးဖြစ်သူကိုပြန်မုဒိန်းကျင့်နေတဲ့မူဆလင်ခေါင်းဆောင် ရဲ့ ဗီဒီယို အွန်လိုင်းမှာ ပြန့် နှံ့ 
မြေးဖြစ်သူကိုပြန်မုဒိန်းကျင့်နေတဲ့စွပ်စွဲပြောဆိုသံတွေပါဝင်တဲ့ မုတ်ဆိတ်နဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဗီဒီယိုကို ယူကျုမှာတင်ထားတာတွေ့ ရပါတယ်။ ဒီလူဟာဆီးရီးယားက အတိုက်အခံအဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ရှိတ်မိုဟာမက်ကာဆင်အယ်လ်နာ လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလူဟာ အီမင်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဗီဒီယိုထဲမှာ ခင်ဗျားမြေးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံနေရလား လို့ မေးပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေ တာကို
ဆီးရီးယားအစိုးရဟာ ဗီဒီယိုအတုတွေရိုက်ပြီးအတိုက်အခံကိုသိက္ခာချဖို့ ဖြန့် ဝေမှုတွေလုပ်တတ်လို့ 
ဒီဗီဒီယိုမှန်ကန်တယ်လို့ တထစ်ချမယူဆနိုင်ပါဘူးလို့ ArabDigestကပြောပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုကိုအသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှကြည့်ပါ။
Warning - Item Syrian opposition leader caught raping his
granddaughter might contain content that is not suitable for
Posted by drmyochit Sunday, January 26, 2014, under သတင်းများ | No comments
Sandra Nabucco လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးဟာ သူ့ရဲ့ ခွေးနဲ့အတူ Rio de Janeiro မြို့မှာ လမ်းလျှောက် ထွက်နေတုန်း ဓာတ်တိုင်ပေါ်ကနေ ဖြူကောင်တစ်ကောင်ဟာ သူမခေါင်းပေါ်ကို ပြုတ်ကျခဲ့ပါတယ်။
Facebook သည် ကူးစက်ရောဂါတစ်ခုကဲ့သို့ တစ်ဟုန်ထိုးပုံစံဖြင့် ပျံ့နှံ့လာသော်လည်း ပြန်လည်မှေး မှိန်သွား လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်သုတေသနပညာရှင်များ၏ သုတေသနရလဒ်အရ သိရသည်။ ၎င်းတို့ ၏ လေ့လာချက်အရ လူမှုရေးကွန်ရက်တစ်ခု ဖြစ်သော Facebook သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်သို့ အရောက် တွင် သူ့အား အသုံးပြုနေသူပေါင်း၏ ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ကို ဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကိုရီးယားမှာလည်း ကားပြပွဲအတွက် မော်ဒယ်ကို အားပြုနေရ
Posted by drmyochit Sunday, January 26, 2014, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့တော် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ကားပြပွဲတခုမှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပါ။
ချောမောတဲ့ မော်ဒယ် ၂ဦးရဲ့ပုံများ ဖြစ်ပါတယ်။
photos - www.koreanwonders.com
- အာရှရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကားကိုပြဖို့အတွက် မော်ဒယ်တွေရဲ့အားကို အပြည့်အ၀ ယူထားပါတယ်။
အင်္ကျီနီနီနဲ့က Han Ji Eun ပါပဲ။
အမည်းနဲ့က Im Ji Hye ဖြစ်ပါတယ်။
အရပ်မြင့်မြင့် လှလှပပ ရင်သားကြီးကြီး Im Ji Hye က ကိုရီးယားရဲ့ အထင်ကရ မော်ဒယ်တဦးပါ။
သူတို့ဆီက ကားပြပွဲ၊ အိုင်တီပစ္စည်းပြပွဲတွေမှာ သူ့ကို မော်ဒယ်အဖြစ် မြင်ရပါမယ်။ သူ မပါရင် ကားပြပွဲ လူမလာတော့ဘူးထင်ပါရဲ့။
လူကြိုက်များထင်ရှားတဲ့သူ့ကို အဲဒီပြပွဲတွေနဲ့တွေ့ရ၊ ကိုရီးယားစတိုင် Maxim စာစောင်၊ ကာလသားကြိုက်စာစောင်မျက်နှာဖုံးမှာ တွေ့ရပါတယ် တဲ့။
ဒီပုံထဲ ဟန်ရေးပြနေသူတွေကတော့ ကားရေဆေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်မယ်လို့ ကိုရီးယားရောက် ဓာတ်ပုံဆရာက မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။
ကားတွေကို လာကြည့်ဖို့ မော်ဒယ်တွေကို ထုတ်ပြရ၊ ပိုပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ မလိုအပ်ဘဲ ကားရေဆေးပြနေရ ... ဒါတွေဟာ ဈေးကွက်သဘောအရဖြစ်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
Posted by drmyochit Sunday, January 26, 2014, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
အလှမယ်ပွဲမှာ စိတ်ကြိုက်ပွဲတက်ဝတ်စုံ ၀တ်ဆင်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ မိန်းမလျာအလှမယ်များ။ စည်သူလွင်/မြန်မာတိုင်း(မ်)
အနောက်တိုင်းဆန်ဆန် ရွှေရောင်ဖဲကြိုးခပ်ကြီးကြီးတွေနဲ့ ပြည်တွင်းဖြစ် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်
ပန်းပွင့်တွေကို ရစ်ပတ်အလှဆင်ထားတဲ့ အ၀င်ဝ ခန်းမကြီးဟာ ၀င်လာတဲ့ ဧည့်ပရိသတ်တွေကို
လှလှပပ စောင့်ကြိုနေသလို ကြွရောက်လာသူတွေကလည်း အခမ်းအနားနဲ့အပြိုင် လိုက်ဖက်စွာ
ဒါကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အတွင်းမှာ လိင်တူချစ်သူတွေကို ခွဲခြားဖိနှိပ်ရာမှာ နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့
မန္တလေးမြို့မှာ ဒီနှစ် ၂၀၁၄ နှစ်ဦးမှာပဲ ကျင်းပလိုက်တဲ့ မိန်းမလျာအလှမယ်ပြိုင်ပွဲ (Miss Beauty
Concert 2014) ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီဝေဒနာရှင်တွေ အတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေတဲ့အနေနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ဒီပွဲကြီးကို ဇန်န၀ါရီလ
၁၇ ရက်နေ့က Oriental House စားသောက်ဆိုင်မှာ ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး မန္တလေးမြို့ရဲ့
အထင်ကရပန်းအလှပြင်သူတွေ၊ မိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေ၊ ဒီဇိုင်နာတွေ၊ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေနဲ့
လူ့အခွင့်အရေးလုပ်ဆောင်သူတွေဟာ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲကြီးကို အားပေးဖို့ အတွက် ပွဲမစခင်
ကတည်းက ခန်းမအပြင်ရော အတွင်းဘက်မှာပါ နေရာယူထားကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီလိုပွဲမျိုး မန္တလေးမြို့မှာ ကျင်းပတာ ပထမဆုံးအကြိမ် မဟုတ်တော့ပေမယ့် မနှစ်ကကြုံခဲ့ရတဲ့
အဖြစ်အပျက်တွေ နောက်ပိုင်းမှာ ပထမဆုံး ပြန်လည် ကျင်းပတာမို့ လိင်တူချစ်သူတွေအဖို့
စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့၊ အကောင်း ဘက်ကို ရောက်လာတယ်လို့ ပြောရမယ့် ပွဲတစ်ပွဲလို့
ရတနာပုံမင်းနေပြည်တော် နန်းစိုက်ရာမြို့ဖြစ်တဲ့မန္တလေးမြို့မှာ အခုလို မိန်းမလျာတွေအတွက်
အလှမယ်ပြိုင် ပွဲတွေကျင်းပတာဟာ လိင်တူချစ်သူတွေအတွက် ခွဲခြားမှုတွေ တဖြည်းဖြည်း
လျော့နည်းလာစေတာ မှန်ပေမယ့် စင်ပေါ်မှာ တင်အောင်မြင်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ နေရာအနှံ့မှာပါ
လူဝင်ဆံ့ စေချင်တယ်လို့ ပွဲတက်လာသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Equality Myanmar Organization မှ
ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မျိုးမင်း က ပြောပါတယ်။
"အခုလို လိင်တူချစ်သူတွေကို အားပေးရာရောက်တဲ့ပွဲမျိုး ခပ်စိပ်စိပ် ကျင်းပနိုင်လေလေ သူတို့ကို
လူသတိထားမှု များများရပြီး လက်ခံနိုင်လေလေဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုလို သိသာထင်ရှားတဲ့
နေရာမျိုးမှာ အသိုင်းအ၀ိုင်း တစ်ခုလောက်အတွင်းမှာပဲ လက်ခံလာတာ ကျယ်ပြန့်လာတာမျိုး
ထက် စင်အောက်ကနေရာအနှံ့မှာရှိတဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေအတွက်လည်း စဉ်းစားပေးဖို့ လိုအပ်
ပါလိမ့်မယ်"လို့ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။
အလှမယ်ပွဲမှာ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အီမို ယှဉ်ပြိုင်နေစဉ်။ စည်သူလွင်/မြန်မာတိုင်း(မ်)
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်းမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအနေနဲ့ အဆိုးဆုံးအဖြစ် မန္တလေးမြို့မှာ လိင်တူ
ချစ်သူတွေ ကို ဖမ်းဆီးနှိပ်ကွပ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေလည်း ရှိခဲ့တာကြောင့် ၂၀၁၄ နှစ်စမှာ
ပွဲဦး ထွက် ခမ်းနားကြီးကျယ်စွာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒီပွဲကြီးက ဖိနှိပ်သူတွေကို စိန်ခေါ်တာမျိုးတော့
မဟုတ်ပါဘူး လို့လည်း သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
"လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ အစွမ်းအစကို ဖော်ထုတ်တာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က စိန်ခေါ်တာမျိုး
တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူကို လူလိုတန်ဖိုးထား အသိအမှတ်ပြုစေချင်တာဖြစ်ပြီး လိင်တူချစ်သူတွေ
ဘက်ကလည်း အလှအပ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ လူသားအကျိုးပြုအလုပ်တွေပါ လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါ
တယ်"လို့ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောပါတယ်။
ပွဲတက်ခဲ့ကြတဲ့ အခြားလိင်တူချစ်သူတွေကလည်း သူတို့အပေါ် ပုံမှန်လူသားတစ်ဦးလိုပဲ
တန်ဖိုးထား ဆက်ဆံစေလိုကြပြီး လိင်တူချစ်သူတွေအနေနဲ့လည်း အများအမြင်မှာ မသင့်တော်တဲ့
အပြုအမူမျိုး မပြုလုပ်မိအောင် ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ကျော်လောက်ကတည်းက အာဆီယံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့
သလို ပြည်တွင်းမှာကျင်းပတဲ့ မိန်းမလျာအလှမယ်ပွဲတွေမှာ ဆုများစွာရရှိသူလည်းဖြစ်၊
လူ့အခွင့်အရေးအတွက်လှုပ်ရှား သူလည်းဖြစ်တဲ့ အိမ့်လေးကလည်း ဦးအောင်မျိုးမင်းပြောသလိုပဲ
အခုလို အလှမယ်ပွဲတွေဆက်နေတာမျိုးက သူတို့ကို လူတွေ ပိုသတိထားမိစေတယ်လို့
"အခုလိုပွဲတွေက ကိုယ့်ရုပ်ကို ဘယ်လောက်လှတယ်ဆိုတာ ပြချင်တာသက်သက်မဟုတ်ဘဲ
မိန်းမလျာတွေလည်း သာမန်လူတွေလို လူရှေ့မှာ ထွက်ရပ်ရဲတယ်ဆိုတာကိုပြစေပါတယ်။
ပြီးတော့ ပြိုင်ပွဲတွေကလည်း အလှအပ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ အရည်အချင်းပိုင်းနဲ့ ဗဟုသုတ
ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်း တော်တော်လေး ထပ်ပေါင်းလာပါပြီ" လို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့
မိန်းမလျာအလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ Best Activist, Miss Popular, Miss Human Rights စတဲ့
ဆုတွေရဲ့ပိုင်ရှင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အိမ့်လေးက ပြောပါတယ်။
မနှစ်ကကြုံခဲ့ရတဲ့ မန္တလေးမြို့နေ လိင်တူချစ်သူတွေကို ခွဲခြားဖိနှိပ်တဲ့ အခြေအနေတွေကို
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ဆက်မဖြစ်အောင် လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေက ကြိုးစားနေသလို လိင်တူ
ချစ်သူတွေအနေနဲ့လည်း အသွားအလာအနေအထိုင်တော့ ဆင်ခြင်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"ဒီမှာက တခြားမြို့တွေထက် ဖိနှိပ်တာ ပိုခံခဲ့ရတော့ အခုချိန်မှာ မိန်းမလျာတွေကို သာမန်အချိန်
တွေမှာထက် အခုလိုပွဲမျိုးရှိတဲ့အချိန်မှ ဘွားခနဲအများကြီးကို တွေ့ရတာ။ လူသားထုတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့
ကျွန်မတို့မိန်းမလျာတွေကို မနှိပ်စက်စေချင်သလို ကိုယ်တွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀
တန်းတူရဖို့အတွက် လိင်တူချစ်သူတွေဘက်ကလည်း မျက်စိနောက်အောင်တော့ မနေသင့်ဘူး
ပေါ့"လို့ အိမ့်လေးက ပြောပါတယ်။
အိမ့်လေးအနေနဲ့ ဒီလိုပြောဆိုလိုက်ပေမယ့်လည်း ပွဲကျင်းပရာညက စင်ပေါ်က အလှမယ်တွေကို
စင်အောက် မှာ အားပေးနေတဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေကိုယ်တိုင်က အော်ကြီးဟစ်ကျယ် လှောင်ပြောင်
စနောက် ခဲ့တာကတော့ ရိုင်းပင်းကြရမယ့် သူတွေအချင်းချင်းပေါ်မှာ ရိုင်းပျသလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့
ရုပ်ဆိုး လှတဲ့မြင်ကွင်းလို့ပဲ သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူ အလှမယ်တွေဟာ ၀တ်စုံသုံးစုံနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး အလန်းစားဝတ်စုံတွေနဲ့
၀တ်ဆင် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတာမို့ ပုံမှန်အလှမယ်ပွဲတွေလို အရည်အချင်းပြသပွဲတွေ၊ ဉာဏ်စမ်းပွဲတွေ
မထည့်ခဲ့ပေမယ့် ဖျော်ဖြေရေးအနေနဲ့ ကြည့်လို့ ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲလို့ ဆိုရပါမယ်။
မန္တလေးမြို့ရဲ့နာမည်ကျော် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ မျိုးမင်းစိုးကတော့ မန္တလေးမြို့မှာ ဒီလိုပွဲမျိုး ကျင်းပ
လာနိုင်တာဟာ လိင်တူချစ်သူတွေကို ဖိနှိပ်တာတွေ အတော်လေး လျော့နည်းလာပြီး လိင်တူ
ချစ်သူ အသိုင်းအ၀ိုင်းဟာလည်း အရင်ကထက်စာရင် ပွင့်လင်းလာတာကြောင့်လို့ ပြောပါတယ်။
"တချို့က မန္တလေးမြို့မှာ အခုထိ မိန်းမလျာတွေကို အဖမ်းအဆီးတွေရှိနေတုန်းပဲလို့ ထင်ကြတယ်။
တကယ်က အခုချိန်မှာ မန္တလေးမြို့ မှာ တော်တော်ပွင့်လင်းလာလို့ အခုလိုမျိုးပွဲတွေလည်း လုပ်ခွင့်
ရလာတာပါ။ အသိုင်းအ၀ိုင်း အဆင့်အတန်းတစ်ခုချင်းစီကို လုပ်ကြတဲ့ပွဲမျိုးတွေထက် အလှအပကို
စိတ်ဝင်စားတဲ့ မိန်းမလျာအားလုံး ပါဝင်နိုင်တဲ့ ပွဲမျိုးတွေလည်း များများလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်"
လို့ မျိုးမင်းစိုးက ပြောပါတယ်။
ဒီလိုပွဲတွေ ကျင်းပတာဟာ လိင်တူချစ်သူ အချင်းချင်း ချစ်ခင်စည်းလုံးစေတဲ့အပြင် သူတို့
အသိုင်းအ၀ိုင်းကိုလည်း ယုံကြည်ချက်ပိုရှိစေပေမယ့် အများပြည်သူတွေအနေနဲ့ ၀ိုင်းမကူညီရင်
တော့ ဘယ်လိုမှ အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ပွဲတက်လာသူ မိန်းမလျာအလှမယ်ဟောင်း
တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စိုးက ပြောပါတယ်။
"ရန်ကုန်နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် မန္တလေးက နယ်လိုဖြစ်သွားပေမယ့် မီဒီယာတွေကတစ်ဆင့် လူ့
အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေကတစ်ဆင့် လိင်တူချစ်သူတွေဆိုတာ လူတန်းစားတစ်ရပ်ဆိုတာ
သိလာကြပါပြီ။ ပြီးတော့ လူ့အခွင့်အရေး တစ်ရပ်အဖြစ် တောင်းဆိုနေထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်း
သိလာကြပြီ။ ဒါပေမဲ့ စည်းလွတ် ၀ါးလွတ်နေလို့တော့ ဘယ်အရာမှ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတော့ ကိုယ်တွေဘက်ကလည်း စည်းကမ်းတကျနဲ့ အဆင့်အတန်းရှိရှိနေတတ်ဖို့ လိုပါတယ်"လို့
ဒီပွဲကြီးကို ပန်းအလှပညာရှင် မာမီကင်းက ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်သလို ရရှိခဲ့တဲ့အလှူ
ငွေကျပ်သိန်း ၂၀ ကို မန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီဝေဒနာရှင်တွေအတွက် အစိုးရ
မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကနေတစ်ဆင့် လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
"ဒီပွဲကို စလုပ်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ကတည်းက အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီဝေဒနာရှင်တွေကို ပြေးမြင်မိလို့ပါ။
ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတဲ့ မိန်းမလျာတွေအပြင် ကလေးငယ်တွေနဲ့ ကူးစက်ခံရသူမှန်သမျှကို ကူညီ
လှူဒါန်းသွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒီလိုပွဲမျိုးက အလှအပဆိုတာ ချည်းသက်သက်မဟုတ်ဘဲ
ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးနိုင်တဲ့၊ လိင်တူချစ်သူအချင်းချင်းစုစည်းပြီး ဗဟုသုတတွေဖလှယ်နိုင်တဲ့
ပွဲမျိုးဖြစ်စေချင်တာပါ"လို့ ပွဲကျင်းပဖြစ်တဲ့ ရည်ရွယ်ရင်းကို မာမီကင်းက ပြောပြပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုကို မြတ်နိုးသိမ့်၊ ဒုတိယဆုကို ဂျူးဂျူးစံနဲ့ တတိယဆုကိုတော့
နန်းထက်ထက်မွန်းက ရရှိသွားခဲ့ပြီး ကျပ်သုံးသိန်း၊ နှစ်သိန်း၊ တစ်သိန်းနဲ့ ဘန်ကောက်မြို့ကို
သွားရောက်နိုင်ဖို့ အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ်အပြင် မိတ်ကပ်ပြင်ပစ္စည်း တစ်စုံစီပါ